Imerina-Ambaniandro - Wikipedia
Imerina-Ambaniandro dia ny faritra nanjakan-dRalambo. Ralambo (1575-1610), no namorona ny teny hoe Imerina-Ambaniandro teo Ambohidrabiby, izay renivohi-panjakany. Roa amby roapolo km miala an'Antananarivo amin'ny làlana mankany Anjozorobe no misy an'Ambohidrabiby, vohitra miorina eo antampon-tendrombohitra efa hatramin'ny taonjato faha-16. Teo Ambohidrabiby no namorona sy nametraka soatoavina maro Ralambo sy ny Andriandoriamanjaka, mpanolotsainy, koa isan'izany ny anarana hoe "Imerina-Ambaniandro".
Raha sendra nitaninandro teo ambony vato eo ambony atsimo ivelan-kady amin'ny vohitr'Ambohidrabiby hono Ralambo ka nanao fanorona tamin'nyAndriandoriamanjaka iray mpanolotsainy dia nangingina tsy nahitan-teny be ihany izy. Dia nihevitra ilay Andriandoriamanjaka sao efa ho resy am-panorona no mampangingina an-dRalambo ka somary natsafainy sao mafanafana ny Andriana fa nanevika ny masoandro na dia efa mody hariva ihany. Fetsy anefa hono Ralambo ka nolazainy fa ny mijery ny fidadasiky ny fanjakany no mampanerinerina azy. Avo rahateo moa ilay toerana nitaniany andro ka tapaka teo ny heviny fa "Imerina" (izany hoe mampanerinerina) no ataony anaran'ny faritry ny fanjakany ary ny vahoakany tsy ankanavaka, na andriana na hova na andevo dia antsoiny hoe "Ambaniandro" fa izy Ralambo ihany no "amboniandro". Dia izany no niatombohan'ny fitenenana hoe Imerina-Ambaniandro fa talohan'izany dia Ankova no anaran'ny faritra ary Hova no anaran'ny mponina nonina taty anivon'ny riaka.
Tato aorina ary, noho ny fitenenana mahavantana kokoa dia io "Imerina" io no niteraka ny anarana hoe "Merina" izay nentina niantsoana koa ny "Ambaniandro". Nefa ireo foko hafa indrindra ny any anindrana dia mbola nampiasa hatrany ny teny hoe "Ankova" hiantsoany an'Imerina, ary "Amboalambo" no niantsoan'ireo foko ireo ny mponina taty Imerina satria tsy laitrany ny mpanjaka Ralambo izay naharesy ny Sihanaka sy Bezanozano sy Sakalava ka nataony izany "Amboalambo" izany ho toy ny fanozonana an-dRalambo sy ny vahoakany. Arak'izany, teo Ambohidrabiby no nipoiran'Imerina sy ivon'Imerina voalohany ary toerana nipoiran'ny fanjakan'andriana amin'ny endrika maha-merina azy.
Nihalehibe hatrany hono ny fanjakan-dRalambo ary ireo mpanjaka nandimby azy moa dia nanao ho toy ny fanilo mihitsy io teny hoe "Imerina" io ka isaiky ny nisy vohitra resiny dia satriny ny nanisy hoe "Imerina" amin'ny anaran'ireny vohitra ireny, indrindra raha fandresena lehibe izany. Ohatra amin'izany, Imerikasinina (satria resin-dRalambo ny mpanjaka Andrianafovaratra teo ka nametraka Ralambo fa manomboka hatreo dia Imerina no hasinina), Imerinafovoany (fa Vazimba no teo ka niitatra hatreo ny fanjakan-dRalambo), Imerimandroso (nanohitra ny mponina teo nefa hono tsy mahazo mihemotra Imerina fa tsy maintsy mandroso), Imeritsiadino (na lavitra aza hono Imerina dia tsy azo hadinoina), Imerinavaratra (amin'ny faritr'i Fandriana); Imerin'Imady (nanohitra an-dRadama I ny Betsileo tao Imady ka tsy namelan-dRadama I raha tsy babony ary nisy kosa nilaza fa maro tamin'ny Merina no nitsoaka fanompoana ka nanorim-ponena ao Imady, saingy tsy hadinony hatrany Imerina), Imeritsiafindra, Imerintsiatosika, sns.
Maro tamin'ireo mpanjaka merina no nitondra sy nisalotra io teny "imerina" io tamin'ny anarany indrindra nanomboka tamin' Andriamasinavalona toa an' Andrianavalonimerina, nanjaka teo Ambohidrabiby ary Andrianampoinimerina, mpanjakan'Imerina valo toko.
Ireo mpanjakan'Imerina tao aorian-dRalambo moa dia tsy nitsahatra nanitatra an'Imerina ka isan'izany Andrianampoinimerina ka lasa valo toko mihitsy ilay Imerina teo Ambohidrabiby fahizay dia: Avaradrano, Atsimondrano, Ambodirano, Vakiniadiana, Marovatana, Vakinimananara, Vakinisisaony ary Vonizongo.
Ankehitrio, tamin'ny nametrahana ny faritra 22 dia nohadinoina tanteraka io anarana manan-tantara sy mananjina atao hoe Imerina io ka "Faritra Analamanga" no niantsoana azy.
Inoana anefa fa any andro, any volana sy taona, hiverina indray ny fampiasana amin'ny tokony ho izy ny anarana "Imerina".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Imerina-Ambaniandro&oldid=979655"
Dernière modification le 14 Janoary 2020, à 11:36
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2020 amin'ny 11:36 ity pejy ity.